I-Wholesale okunethezeka okunethezekile okungenalutho kwesitsha sesitsha sekhandlela lengilazi ye-matte enefektri yesivalo sensimbi nabakhiqizi |Winby
Okunethezeka okungenalutho ingilazi ye-matte isitsha sesitsha sesitsha sesitsha esinesivalo sensimbi
Imbiza yekhandlela yengilazi ye-matte engenalutho
Nikeza isampula yesevisi yokwenza amakhandlela e-DIY
Sihlinzeka ngenkonzo yamakhasimende ye-ODM OEM futhi samukela i-oda lesilingo.
Imbiza yengilazi ye-matte engenalutho izimbiza zekhandlela lengilazi eliqhwaqhwa
1. Imbiza yekhandlela ingenziwa ngosayizi nombala ohlukile, siyazamukela izidingo zamakhasimende.
2. Le ngqayi yekhandlela yenziwe ngengilazi efriziwe nesivalo se-bamboo, i-surfacetexture yinhle kakhulu.
3. Futhi singaphrinta ilogo yamakhasimende phezu kwenkomishi.
Ngamafuphi, usayizi, uphawu, umbala ungenziwa ngokwezifiso, ngokuqinisekile singakunikeza ikhwalithi enhle, intengo enkulu kanye nezinga eliphezulu ngemuva kwesevisi yokuthengisa.
Sihlinzeka ngamakhandlela engilazi anephunga elimnandi, ama-Tealights, amakhandlela ezinsika, amakhandlela eVotive, izibambi zamakhandlela, izintambo nezinye izinto ezingavuthiwe zamakhandlela.
Umbala, iphunga, uphawu nokupakisha konke kungenziwa ngezifiso !!!
Futhi hlinzeka ngesevisi yesampula.
Umbala Okumhlophe, okumnyama, okumpunga, kungenziwa ngezifiso
Ukusetshenziswa Ukwenza amakhandlela/Ukuhlobisa ikhaya
Isevisi Ngokwezifiso/ODM OEM/isampula
Okokuqala nje,sineisitifiketingaphansi kwezinga le-Euro.Amakhandlela ethu asezingeni eliphezulu laseYurophu, ngakho akudingeki ukhathazeke ngekhwalithi yamakhandlela ethu.Imikhiqizo yethu ithunyelwa emazweni amaningi nasezifundeni, njenge-United States, iRussia, iYurophu, iNingizimu-mpumalanga, njll. Futhi yamukelwa kahle ngamakhasimende ekhaya naphesheya.
Ngokolunye uhlangothi,isibambi sethu sekhandlela lesingilazi sisetshenziswa ngezinto ezingavuthiwe zekhwalithi ephezulu kanye ne-eco-friendly glassware, okungeyona neze ingilazi ephansi futhi engeke ibangele ukulimala kubantu.Kunezinhlobo eziningi zezimbiza zamakhandlela engilazi ozikhethele zona, njengezimbiza zengilazi eziyinsika, izimbiza zamasoni, izimbiza zengilazi ze-squire, izimbiza zengilazi ze-pudding, izimbiza zengilazi zesitayela se-yankee, njll.
Ngaphezu kwalokho,izimbiza zekhandlela lengilazi zingenziwa ngemiphumela ehlukene, njenge-matte, frosted, polished, spraying.Ungakhetha umthelela owuthandayo.Kunjalo, uma ufuna ukuphrinta ilogo yakho noma amalebula enkomishini yengilazi, nathi singakwenza.Udinga nje ukusithumela imiklamo yakho, singakwenzela ukuhumusha njengesithenjwa.
Ngaphezu kwalokho,ungakhetha izivalo ezahlukene zezimpahla zakho.Sinesivalo se-bamboo, isivalo sokhuni, isivalo sensimbi, esihle esitsheni sengilazi.
Okokugcina, mayelana nokupakisha, sisebenzisa isikhwama se-bubble yamakholomu emoyeni ukugoqa izimbiza zekhandlela zeglasi ukuze sigweme umonakalo ngesikhathi sokuthutha.Sizovikela imikhiqizo ngezinga eliphezulu kakhulu, ukuze imikhiqizo ilethwe ngokuphepha kumakhasimende.
Okwedlule: frosted angenalutho ikhandlela isitsha ingilazi jar
Olandelayo: Imbiza yekhandlela lengilazi enosayizi abaningi ecacile enesivalo
Isitsha Sekhandlela Lengilazi Emnyama
Ijeke Yengilazi Yekhandlela Enesivalo Sokhuni
Isitsha Sekhandlela Esinesivalo
Izitsha Zekhandlela Lengilazi Ngokwezifiso
isitsha sekhandlela esingenalutho
Isitsha Sekhandlela Lengilazi Elingenalutho
Isitsha Sekhandlela Lengilazi Eqandisiwe
Umkhumbi Wekhandlela Lengilazi
imbiza yekhandlela yokunethezeka
Ikhandlela le-wax yengilazi yengilazi embossed
ingilazi esobala ikhandlela elimnandi
Upharafini wax glass jar art ikhandlela
Ikhandlela Lobuciko LikaKhisimusi Lenkanyezi
Ikhandlela le-wax yesoya elinentambo kakotini-eluhlaza okwesibhakabhaka/emhlophe
I-TC33 inkomishi ye-Ceramic ikhandlela elinephunga elimnandi ...